Jilaagii caalamiga ahaa ee matalay shakhsiyada James Bond ee Sean Connery ayaa geeriyooday…. – Hagaag.com
Jilaagii caalamiga ahaa ee matalay shakhsiyada James Bond ee Sean Connery ayaa geeriyooday….
Posted on 31 Oktoobar 2020 by Admin in fanka // 0 Comments
Idaacada BBC-da ayaa ku dhawaaqday geerida jilaaga caalamiga ah ee reer Scotland Sean Connery oo ku dhintay da’da 90 jir. Waana qofkii ugu horreeyay ee soo bandhiga shakhsiyada James Bond ee taariikhda shineemada dhowr sano.
Connery wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Oscar, laba abaalmarin oo loo yaqaan ‘BAFTA Awards’, 3 abaalmarin ee Golden Globe Awards iyo Henrietta Award. Sidoo kale waxaa la gudoonsiiyay Abaalmarintii Lifetime Achievement oo ka timid Xarunta Kennedy Center sanadkii 1999. Sidoo kale Boqorada Ingriiska Queen Elizabeth II waxay gudoonsiisay Billada Knight sanadkii 2000, kadib markii labo jeer dowlada Ingriiska u diiday sababtoo aheyd wuxuu si cad u taageeray xisbiga Scottish National Party, oo u ololeeya madaxbanaanida Scotland.
Dhawaan, waxaa loogu codeeyay “The Best James Bond Ever”, maadaama uu jilay 7 filim (Code 007) intii u dhaxeysay 1962 iyo 1983. “Connery maahan sida jilaa caadi ah oo kale, waa halyeey run ah iyo xiddig taariikhda aan ka dhiman doonin,” ayuu yiri agaasimaha film soo saarida caalamiga ah ee Steven Spielberg.
Munaasabad uu qabtay Machadka Filimada Mareykanka sanadkii 2006 si loogu abaalmariyo abaalmarin la xiriirta waxqabadkiisa xirfadeed, Connery wuxuu cadeeyay in la joogo waqtigii dhinac loo sudhi lahaa koofiyadiisa, isagoo yiri, “Ugu dambeyntii waan ka fariistay.”
Sean Connery ka hor dhimashadiisa, wuxuu go’aansaday, markuu gaaray da’da sagaashan jirka, inuu u guuro oo xaaskiisa kula noolaado Bahamas, isaga oo waqtigiisa u huray ka sheekeynta sheekada noloshiisa taasi oo lagu wado inuu qoro Hunter Davis, oo horey u qoray xusuus-qorkii Madaxweynaha Mareykanka Bill Clinton.